Denko အမှတ်တံဆိပ် LED Emergency Light ကိုခေတ်မှီသော နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Electro – Galvanized Steel များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံသည်။ အိမ်တွင်းတပ်ဆင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အိမ်အပြင် တပ်ဆင်ရာတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော LED မီးလုံးများ ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သော Lighting များကို တိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချနေခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Silver Lotus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ ရုံး၊ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းများတွင် လူခေါ်ခေါင်းလောင်းဘဲများတွင် မီးဆိုင်းမီးပန်းလေးများ တပ်ဆင်အလှဆင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြ န့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းဘဲလ် ခလုတ်များ တွင် မီးဆိုင်းမီးပန်းလေးများ ( Switch Mechanisms ) ကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်း များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုအလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း လူခေါ် ခေါင်းလောင်းဘဲလ် ခလုတ်များတွင် မီးဆိုင်းမီးပန်းလေးများ ( Switch Mechanisms ) ကိုဝယ်ယူအသုံးပြု အလှဆင်လိုပါက Silver Lotus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
လေဆာ ဆလိုက်မီးလေးတွေနဲ. အိမ်ရှေ. အလှဆင်နိုင်ဖို. ကြယ်တာရာ လေဆာ လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ မီးပလပ်ထိုးရုံနဲ. တစ်အိမ်လုံးကို လှပစေပါမယ်။ အခန်းတွင်း ဖြစ်စေ၊ ခြံထဲမှာ ဖြစ်စေ Party (ပါတီ) လုပ်ဖို. အထူးသင့်တော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း 39000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် သေသပ် လှပသော စားပွဲတင် မီးအိမ် ( Table Lamp )
Silver Lotus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ဧည့်ခန်း စားပွဲခုံများ ၊ အိပ်ခန်းများရှိ စားပွဲခုံ များတွင် လှပသော စားပွဲတင် မီးအိမ်များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရော င်းချလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း စားပွဲ တင်မီးအိမ် ( Table Lamp )များသည် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ် လှပပီး အသုံးပြုရလွယ် ကူသောကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အတွက် မီးပျက်ရာတွင်လည်း ကော င်း အမှောင်ထဲတွင်လည်းကောင်း အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်သော စားပွဲတင် မီးအိမ် များ ( Table Lamp )ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အသုံးဝင်ေ သာ အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း စားပွဲတင် မီးအိမ် ( Table Lamp ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Silver Lotus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
LED Round Panel Light သည် အလင်းစွမ်းအားမြင့်မားတောက်ပပြီး တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းကာ အသုံးပြုရန် လွယ်ကူစေပါသည်။Energy Saving ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူတပ်ဆင်လိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းမှာလည်းချိုသာကာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရုံးသုံး၊အိမ်သုံး၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဆေးရုံများနှင့်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ တပ်ဆင်လိုသောနေရာများ စသည့်တို့တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဒီဇိုင်းအမျိုးအစားများလည်း စုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။
lighting engine good quality and reliability. Life time above 30,000 hours. Customizing LED chip is available. Die-casting aluminum heat sink.High quality frosted anodized reflect.Using Zhaga lighting engine with high lumen efficiency; CRI more than 80; UGR is less than 22. High efficient LED..High-quality aluminium.With Zhaga lighting engine with high lumen efficiency.Energy saving, no UV and thermal emissions.On request also available as dimming version.High lumen 50W 56W Led DownLight . ရုံးခန်း၊ အစည်အဝေးခန်း၊ ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းများတွင် အသုံးပြု တပ်ဆင်နိုင်ပြီး High Quality ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ချရပါသည်။ရုံးသုံး၊အိမ်သုံး၊ဟိုတယ်သုံး၊စက်ရုံသုံး Wires,Cabels,Switches နှင့် Lighting ထုတ်ကုန်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာလက်လီလက်ကားရောင်းချပေးနေပါသည်။
Long life time stands out as the number one benefit of LED lights. LED bulbs and diodes have an outstanding operational life time expectation of sometimes up to 100.000 hours.This is 11 years of continuous operation, or 22 years of 50% operation. If you leave on the LED fixture for 8h per day it would take around 20 years before you’d have to replace the LED bulb.LED’s are different to standard lighting: They don’t really burn out and stop working likeastandard light, moreover the lighting diodes emit lower output levels overavery long period of time and become less bright. Electrical Mega Trading Co.,Ltd မှ Lighting Products အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်သည့်အပြင် Wires ,Cables ကြိုးများနှင့် အခြား Electrical Products များစွာကို ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများစိတ်တိုင်းကျ ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
ပိုမိုတောက်ပသော အလင်းရောင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့် Ceiling Lamp ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်ရာမှာလည်း အလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းကာ အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။စုံလင်သောဒီဇိုင်းများစွာရှိပြီး နေအိမ်၊ရုံးခန်း၊Restaurants များ၊ဆေးရုံများ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာမှန်ကန်ကာ တာရှည်အသုံးခံနိုင်ပါသည်။